ကြည် ပါတယ်လေ.. | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
မနေ့က ခင်မင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်က သူ သူ့ကောင်မလေးရှိတဲ့ အင်္ဂလန်မှာ မင်္ဂလာသွားဆောင်ရင် ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက်ကို ဆက်ဆက်လိုက်ခဲ့ဖို့ အဖော်ခေါ်ပါတယ်။ သူကလဲ ထုံးစံအတိုင်း မရှုပ်မရှင်းလေးတွေ ပတ်လုပ်ထားတော့ တကယ်လို့များ ပြေးပေါက်မှားရင် အဖော်ရှိအောင်ပါ။
အဲဒီသူငယ်ချင်းက အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အရမ်းစဉ်းစားတတ်သူမို့ ဒီတခါတော့ သူအတည်ပေါက်များ စဉ်းစားကုန်ပြီလားလို့ တွေးရပါသေးတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ နောင်ပြင်ရင် ခက်တဲ့အမျိုးလို့ အဆိုရှိလေတော့ ကိုယ်တို့တုန်းကလဲ အပီအပြင် စဉ်းစားခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ စဉ်းစားရတဲ့သူက ကာယကံရှင် နှစ်ယောက်စလုံး မဟုတ်တာခက်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်ကျော်ကပေါ့။ နွေလတလရဲ့ ရက်တရက်ကို ကိုယ်တို့က ရန်ကုန်တရားရုံးချုပ်ကြီးမှာ သွားလက်မှတ်ထိုး လက်ထပ်ကြမယ်လို့ ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ တရားရုံးကိစ္စတွေ နားမလည်တာမို့ အားလုံးကမကထ စီစဉ်တာက ကိုယ်တို့ရဲ့ ဘဘကြီးပါ။ ဘဘက တရားရုံးချုပ် ရှေ့နေကြီး။ မြို့မ ဦးတင်အေး တဲ့။ အခုတော့ သူမရှိရှာတော့ပါဘူး။ စစ်အစိုးရက ရမယ်ရှာ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီး ဆုံးခါနီးမှ အကျဉ်းထောင်က လွှတ်ပေးလိုက်လို့ သိပ်မကြာခင် လပိုင်းအတွင်း ဆုံးသွားရှာသူပါ။ ဟိုးအရင်က ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌဟောင်းပါ။
ဘဘက တူမတွေထဲမှာ အကြီးတွေကို ဖြတ်တက်ပြီး ပထမဆုံး ဆောင်တဲ့ မင်္ဂလာမို့ အိမ်မှာပဲ လက်မှတ်ထိုးမလား မေးပါသေးတယ်။ ကိုယ်တို့က ၀တ္ထုတွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးသလို ရုံးတက် လက်မှတ်ထိုးကြလေသတည်းဆိုတာကို သဘောကျလေတော့ ရုံးကိုပဲသွားမယ် စီစဉ်ပါတယ်။
နှစ်ဖက် မိဘ မောင်နှမတွေနဲ့ မနက်စောစောပဲ ရုံးကြီးကို သွားကြတယ်။ ဘဘက အကုန်စီစဉ်ပြီးသား။ ဘဘမိတ်ဆွေ တရားသူကြီးကလဲ အဆင်သင့်ပဲ။ အသိသက်သေအဖြစ် ကိုယ့်ဖက်က အဖေက လက်မှတ်ထိုးမှာ ဖြစ်ပြီး၊ သူ့ဖက်က သူ့ဦးလေး ဦးပွင့်က လက်မှတ်ထိုးပါမယ်။
စားပွဲလေးမှာ ထိုင်ကြတော့ ဘဘက လောက၀တ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ တရားသူကြီးကို ကိုယ်တို့အားလုံးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ သူနဲ့ မယားညီအကိုဖြစ်တဲ့ အဖေ့ကိုလဲ အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါက ကဗျာဆရာ တင်မိုးပေါ့။ အဲဒီမှာ ပြဿနာက စ တာပါ။
တရားသူကြီးကလဲ အဖေ့ကို စာတွေဖတ်ဖူးလို့ သိနေပုံပါပဲ။ သူလဲ စာဖတ်ဖူးတယ်ဆိုတာ ပွဲမစခင် အဖေနဲ့ စကားစမြည် ပြောချင်ပုံပါ။ အလာပ သလ္လာပ ပေါ့။
ကျနော်တို့ မြို့မှာလဲ စာပေဟောပြောပွဲ တခါလုပ်လို့ ကျနော်နားထောင်ဖူးပါတယ် တဲ့။ အဲဒီတုန်းကလဲ စာရေးဆရာတွေ အတော်လာကြတယ်ဗျ။ ဆရာ မြသန်းတင့်တို့လဲ ပါတယ် ထင်တယ်၊ နောက် တခြား စာရေးဆရာတွေလဲ ပါတယ်။ အင်း..ဟိုစာရေးဆရာ တယောက်လေ၊ နံမည်က “ကြည်” ပါတယ်လေ တဲ့။
အဲဒီတော့ အဖေကလဲ အလိုက်အထိုက် ပြန်ဖြေပါတယ်။
“အော်.. ကြည်အောင် တို့ ထင်တယ်..၊”
“မဟုတ်ဘူးဗျ၊ သူက အဟောအပြော တော်တော်ကောင်းတာပါ။ နံမည်မှာ ကြည် ပါတယ်လေ။”
“ကြည်..ပါတယ်ဆိုတော့ အင်း၊ ဘယ်သူများ ဖြစ်မလဲ၊ ကြည်လင်..?”
“မဟုတ်သေးဘူးဗျ..စဉ်းစားစမ်းပါအုံး၊ ကျနော်လဲ နံမည်လေး အဖျားဆွတ် မေ့နေလို့ပါ။”
“ကြည်..ကြည်..(အဖေက ရွတ်ရင်း အသေအချာ စဉ်းစားရှာပါတယ်၊ ပြီးမှ..) ဟို ကြည်ဇော်ဝင်းများ ဖြစ်မလား။”
“ကြည်ဇော်ဝင်းလား၊ မဟုတ်သေးဘူးဗျ၊ ကြည် တော့ပါတယ် သူ့နံမည်မှာ။”
“အင်း..ဘယ်သူများ ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲ.. ကြည် ပါတယ် ဆိုတော့..။”
အဖေက သေသေသပ်သပ်ဝတ်လာတဲ့ တိုက်ပုံထဲက လက်ကိုင်ပုဝါကို ထုတ်ပြီး ချွေးသုတ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကိုလဲ ချွေးသုတ်ရင်းတချက် လှမ်းကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ မျက်နှာဇီးရွက်လောက်လေးတွေနဲ့၊ မှန်အောင်ဖြေလိုက်နော် အဖေ ဆိုတဲ့ မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ပါ။ အားလုံးက ငြိမ်ပြီး တရားသူကြီးနဲ့ အဖေ့ကို ကြည့်လို့..။
အဖေလဲ ငါမမှန်ရင် သူ ငါ့သမီးကို လက်မှတ်ပေး မထိုးတော့ဘူးထင်တယ်လို့များ တွေးနေသလား မသိ။ စဉ်းစားမှ၊ စဉ်းစားမှ ပေါ့။ တရားသူကြီးကလဲ စဉ်းစားစမ်းပါအုံးဗျ လို့ တွင်တွင်ပြောနေတာပါ။
“ကြည်အောင်၊ ကြည်လင်၊ ကြည်ဇော်ဝင်း၊ ကြည်ဝင်း၊ ကြည်…၊ ကြည်…ကြည်..."
အချိန်တွေလဲ တော်တော်ကြာနေပြီ။ နောက်တော့ အဖေက သူထင်တာ ပြောလိုက်ပါတယ်။ “အဲဒီဖက် ဟောပြောပွဲသွားတာတော့ ကိုနတ်နွယ်တို့ သွားတာပဲဗျ။”
“ဟာ..ဟုတ်လိုက်လေဗျာ၊ သူပဲ၊ သူပဲ။ နတ်နွယ်ပဲ။”
ကိုယ်တို့အားလုံး ကြောင်ကုန်ကြတယ်။ နတ် နွယ် ???… နံမည်မှာ ကြည် ပါတယ်ဆို …။ အခုကျတော့ တလုံးမှ..@#!~$%^&…။
အဖေလဲ ခုမှ အလုံးကြီးကျသွားသလို ချွေးတွင်တွင်သုတ်ပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့ အားလုံးလဲ ဟေး... လို့ မအော်ရုံတမည် ၀မ်းသာသွားကြပြီး ပြုံးနိုင် ရွှင်နိုင် ဖြစ်သွားကြတယ်လေ။
လက်မှတ်ထိုးကြတော့ ဘဘက မိန်းကလေးဖက်ကမို့ ဆုံးမစကား ပြောရာမှာ လင့်ဝတ္တရား (၅)ပါးကို အသေအချာ အကျယ်ချဲ့ သူ့ကို ရှင်းပြပြီး ကိုယ့်ကိုတော့ မယားဝတ္တရား (၅)ပါး ရှိတယ်လောက်သာ အကျဉ်းချုပ် ပြောလို့ ကိုယ်လဲ ခုထိ အဲဒီ ၀တ္တရားတွေ နားမလည်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဲလိုလဲ ရှိသေးတာ။
အပြန်လမ်းမှာကျတော့ အဖေက ပြောပါတယ်။ ငါ့သမီးအိမ်ထောင်ပြုတာကွာ၊ စဉ်းစားလိုက်ရတာ ငါ့မှာ တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အသေအချာ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ နံမည်မှာ ကြည် ပါတယ်လေ..။
အမတို့ အိမ်ထောင်ပြုမှာ စဉ်းစားပုံများ မှတ်သားလောက်ပါရဲ့..။ဟီး
August 10, 2008 at 7:15 AM
ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတယ် အမရယ်း)
ဟား..ဟား....ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က ကြုံဘူးတာကလဲ အဲသလိုဘဲဗျ။
နာမည်မှာ ဘော် ပါတယ်တဲ့။
အဲဒါနဲ့ ရွှေဘော် လားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့။
ငွေဘော် လားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။
ဘော်ပါတဲ့ နာမည်ကလည်း ခပ်ရှားရှားဆိုတော့ ဆရာတင်မိုးထက်ပိုပြီး အကြပ်ရိုက်သပေါ့ဗျာ။
နောက်တော့မှာ သူ့ဘာသာ သတိရသွားပြီး....သိပြီ၊ သိပြီ၊ အောင်ဘာလေ...တဲ့။
အဲဒီနောက်တော့ .....“ဘော်တော့ပါတယ်၊ အောင်ဘာလေ” ဆိုတာ လူတိုင်းပါးစပ်ဖျားမှာ စွဲသွားတော့တာပေါ့။
(ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း လင့်ဝတ္တရားတွေတော့ မသိဘူးဗျ။ မယားဝတ္တရားကိုတော့ မဒမ်ပေါကို အဲဒါတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်လို့ရအောင် နည်းနည်းမှတ်ထားရတယ်...ဟီးဟီး။)
မကြုံဘူးတော့လေ..အဲ..တခုတော့ ရှိတယ် ကိုယ်က
ဗမာဆိုတော့ နည်းနည်းလေးတော့ လွဲမှာပေါ့နော့
အမရေးတာ လာဖတ်ပြီး ရယ်ရတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စိတ်ညစ်နေတာလေးတွေတောင် ပျောက်သွားရတယ်။ ကျေးဇူးပဲ အမရေ။း)
August 10, 2008 at 1:21 PM
peaceful တို့ lovely တို့ လားထင်လိုက်တာ။ အင်း..ဒါမျိုးက မရေးတတ်ရင်တော့သိပ်မထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကလေးပဲ..
ရေးတတ်တော့လဲအရေးထဲမျောပြီး နောက်ကလိုက်တွေးမိလိုက်တာကြည်အေး.ထိတောင်ရောက်လို့ ...
ဒါပါပဲဗျာ ဒီစစ်အုပ်စုအောက်မှာ ကြုံနေရတာ သင်္ဃန်းကျွန်းမြိ့နယ် စာပေ ဟောပြောပွဲတခုမှာ မြို့နယ်ကောင်စီဥက္ကဌက အမှာစကားတက်ပြောတယ် ဆရာစိန်ခင်မောင်ရီကို မသိဘူး ဆရာခင်စိန်တဲ့ ပြောသွားလေရဲ့ ဆရာက ဟောပြောဖို့တက်လာတော့ ရွဲ့ပြီးပြောသွားတယ် မသိရင်လည်း ကျနော့်ကို မှတ်ထားကြပေါ့ဗျာ ရီနေသော ဒေါ်စိန်ခင်၏မောင်-တဲ့
ဟီးဟီး အရမ်းရယ်တာပဲ အမရေ ။ စဉ်းစားလေ ပိုရယ်ရလေပဲ။ စကားမစပ် ဒီလထုတ် မဟေသီထဲမှာ ပါတဲ့ ခက်မာရဲ့ဝထ္ထုထဲမှာ အမနဲ့သူနဲ့ ဖုန်းပြောတဲ့အကြောင်းလေးလဲ ထည့်ရေးထားတယ် သိလား၊
ကြည့်ရတာ တရားသူကြီးတွေ အားလုံး ကြည်ကိုစွဲနေပုံရတယ်
ချိုသင်းရယ်.. တကယ်ပဲ.. အဲလို တ၀ါးဝါးတွေ.. ချိုသင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမသိသေးတာတွေ တော်တော်ကျန်နေသေးတာပါလား..။ ခုလည်း တကယ်ပဲ စိတ်ညစ်နေတဲ့ကြားက...ရယ်လိုက်ရတာ..သာဓုပါတော်...
ဟားးးးး..... စဉ်းစားလိုက်ရတာများဗျာ... ဖတ်ရတာကလည်း တစ်ခါတည်း ဆွဲခေါ်သွားတယ်.. ကောင်းတယ်ဗျို့.... ကြည်ပါ၏....:)
ကျနော်လဲ ကိုမောင်ရင်လိုပဲ...၊ `ကြည် ပါတယ်လေ´ ဆိုတော့ ကြည်ဖြူတာလား၊ ငြိမ်းချမ်းရေးများလားလို့ စဉ်းစားလိုက်တာ စာတပုဒ်လုံး ဆုံးမှပဲ ဘာကြည်လဲ ဆိုတာ သိတော့တယ်။
ကျွန်တော်စဉ်းစားတာက ဆရာကြီးကြည်အောင် မဟုတ်တော့ ဆရာမကြီးကြည်အေးကိုစဉ်းစားနေတာ တလွဲဖြစ်သွားတယ် ဟားဟား
ဟားဟား အမရေးတာတွေကို ရုံးမှာဖတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူး… ဟီး…. ရီရလွန်းလို့…
တရားသူကြီးကတော့ ကျွန်တော့် အဖေရဲ့ ရုံးဝန်ထမ်းတယောက်လိုဖြစ်နေပြီး… သူကိုဝယ်ခိုင်းလိုက်တာက အိုဗာတင်း… ၀ယ်ပြီးပြန်လာတော့.. ပြောလိုက်တာက
“ဆရာ… ဟောလစ် မရလို့ မိုင်လို ၀ယ်ခဲ့တယ်…” တဲ့။
မ ရေ… နီးစပ်တယ်နော်… တော်သေးပါရဲ့ ဆရာနတ်နွယ်နဲ့ ရပ်သွားပေလို့ … စာဖတ်သူစိတ်ထဲ ကြည်လင်သွားစေမယ့် ဒါမျိုးလေးတွေ ရေးတတ်ချင်လိုက်တာ…